Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0813 lar
Lesona 08 : Mitoky amin'ny fahatsaran'Andriamanitra (Habakoka)
18 - 24 Mai 2013
Mahatsiaro ny lazan'Andriamanitra
Alarobia 22 May
Vakio ny Habakoka 3. Inona no ataon’i Habakoka eto, ary inona no mahazava-dehibe izany, indrindra indrindra raha jerena ny fahasarotan’ny toe-java-misy niainany sy ireo fanontaniana saro-baliana natrehiny?
Manambara ny fanekeny ny lalan’Andriamanitra i Habakoka ao amin’ny vavaka nataony izay navadika ho hira namoronana feony (Hab. 3:19). Amin’ny fahatsapana feno ny herin’Andriamanitra no angatahany Azy hahatsiaro ny famindrampony rehefa hanomboka ny fitsarana. Amim-panajana no hitanisan’ny mpaminany ny asa lehibe nataon’i Jehovah tamin’ny lasa ka angatahany Aminy mba hitondra fanavotana ankehitriny. Toa mijanona eo anelanelan’ny fotoana izy. Amin’ny maso iray dia toa mitodika amin’izay niseho tamin’ny andron’ny Eksôdôsy (fanafahana tamin’ny fanandevozana tany Egipta) izy. Amin’ny maso ilany kosa dia mibanjina ny andron’i Jehôvah izy. Maniry fatratra ny hahita ny fanehoana ny herin’Andriamanitra eo amin’ny toe-javatra ankehitriny izy.
Manoritsoritra ny fanafahana ny Isiraely avy tamin’ny fanandevozan’ny Egiptianina ny hiran’i Habakoka ao amin’ny toko fahatelo, izay miendrika tononkalo. Ny zava-nitranga tamin’ny andron’ny Eksôdôsy dia tandindon’ny andro lehiben’ny fitsarana. Tsy tokony hatahotra ny andron’i Jehôvah ny olona fa tokony hiandry sy haharitra ary hifaly amin’ny fanantenana ananan’izy ireo.
Fanandratana ny hery, sy ny voninahitra ary ny fandresen’Andriamanitra ihany koa izany hira izany. Faritan’i Habakoka ho Ilay Masina amin’ny tany rehetra Izy ary ny famirapiratan’ny voninahiny dia tahaka ny famirapiratan’ny tana-masoandro (Hab. 3:4).
Hitsara ireo firenena mpampahory Andriamanitra. Kanefa etsy ankilan’izany dia mitondra fanavotana ho an’ny olony Izy ao anatin’ilay “kalesim-pamonjeny” (Hab. 3:8). Mety tsy ho hita mivantana foana ny herin’Andriamanitra, fa ny olon’ny finoana kosa dia mahafantatra fa eo foana Izy, na inona na inona zava-mitranga.
Miantso antsika hiandry fatratra ny famonjen’i Jehôvah i Habakoka, dia amin’izay fotoana hametrahany ny fahamarinany eto amin’ity tany ity sy hamenoany izao tontolo izao amin’ny voninahiny. Amin’ny alalan’ny hiram-piderana ataon’ny iray amin’ny vahoakan’Andriamanitra, dia ho voataona (Efes. 5:19, 20; Kôl. 3:16) hisaintsaina ny asan’Andriamanitra tamin’ny lasa ihany koa ny hafa ka hanana fanantenana ny amin’ny hoavy be voninahitra. Ny ohatra napetrak’i Habakoka dia maneho ny fomba ahafahana maharitra noho ny fivelomana miaraka amin’izany fahitana izany.
Eritrereto ny fomba nitantanan’Andriamanitra ny fiainanao tamin’ny lasa. Ahoana no anampian’izany anao hianatra ny hatoky Azy sy ny fahatsarany, na inona na inona hoentin’ny hoavy? Nahoana no tena zava-dehibe kokoa mihoatra noho izany ny fibanjinana ilay hoavy fara-tampony rahatrizay izay miandry antsika?